Nagu saabsan - Qalabka Dingxing Qalabka Electromechanical Co., Ltd.
Iska Yaree Haye Fitness
Qalabka Suzhou Dingxing Qalabka Electromechanical Co., Ltd.
Xawaaraha Xawaaraha waa shirkad farsameysa qalabka wax soo saarka CNC ee Shiinaha. Shirkadda waxaa la aasaasay 1999. Ujeedadayada iyo mabda'ayagu waa daacadnimo, hal-abuurnimo, dhammaan-guul. Waxaa naga go'an inaan horumarino naqshadeynta qalabka goynta CNC marwalba. Hadda tiknoolajiyadeennu waxay ku horumartay heer sare. Iyada oo la adeegsanayo habdhaqan hormood ah, wax soo saar qiimo sare leh iyo adeeg aad u wanaagsan, Speed ​​Leopard ayaa si guul leh u ballaariyay baaxadda ganacsiga. Waxaa jira xafiisyo badan oo kuyaal daraasiin magaalo bartamaha dalka oo dhan, oo leh in kabadan 50 injineero iibiya xirfadlayaal ah. Shirkaddu waxay u hoggaansantaa mabda'a u janjeedha dadka.Fiiro u yeelo beerista kartida.Waxaan lacag badan ku bixineynaa tababar shaqsiyeed sannad kasta. Xawaaraha Xawaaraha Xawaaraha ah ee loo yaqaan 'CNC' Leopard CNC waa qalab wax soo saar, Waxqabad iyo Macaash. Waxsoosaarkeena ugu muhiimsan waa CNC End Mill, Tuning Insert For Lathe Tuning Tool, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Oo Hoos U Dhig Haysata Dhammeeyaha Miiska
Alaab tayo sare leh iyo adeeg aad u fiican, ku guuleysta macaamiisha aad u jecel yihiin. Waxaa jira bakhaar weyn oo ku yaal Degmadeenna Suzhou National Hi-Tech. Saami ku filan ayaa ka caawin kara macaamiisha inay yareeyaan cadaadiska maaliyadeed. Kaydso kharashka iyo waqtiga dhalmada. Macaamiilku ha ka walwalo bilaash.
Sababtoo ah diiradda, si xirfad leh. Sababtoo ah xirfadle, aad u fiican. U fiirso inaan kula shaqeeyo!
Shirkaddu waxay ku taal degmada Suzhou teknolojiyad sare. Bedka dhismaha wershadeynta caadiga ahi waa qiyaastii 3000 m². Shirkaddu waxay leedahay 6 waaxood iyo 60 shaqaale.Waxaa jira daraasiin kala duwan oo qalabka wax lagu farsameeyo iyo tijaabinta ah. Iibka iyo adeegyada taageerada farsamo oo dhameystiran. Saami ku filan ayaa ka caawin kara macaamiisha inay yareeyaan cadaadiska maaliyadeed. Kaydso kharashka iyo waqtiga dhalmada.
Daacadnimo: Daacadnimo, in la sameeyo waxa saxda ah.
Win-Win: Iskaashi waxtar u leh mustaqbal wanaagsan.
Hal-abuurnimo: Joogtada keliya ayaa ah isbeddel.
Shirkaddu waxay kaqeybqaadataa daraasiin bandhigyo ah adduunka oo dhan sanad kasta. Waqtigan xaadirka ah, waxaan la sameynay iskaashi aamin ah Jarmalka, Boortaqiiska, Ruushka, Hindiya, Malaysia, Mexico iyo wixii la mid ah.
Nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah
cinwaanka No.60, Xiangjiang Road (South), Chuangye Street, Suzhou National Hi-Tech Degmada 215129
sanduuqa boostada nicogao@speedleopard.cn